ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၃)
ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၃)
Posted by Diamond Key on Nov 28, 2011 in Myanmar Gazette, Photography | 41 comments
Aperture စိန်သော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်စု စိန်သော့ရဲ့ ရိုက်ချက်
ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ အခါမှာ ရိုက်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ကင်မရာကနေ ဓါတ်ပုံအဖြစ်ဖမ်းယူတော့ ပုံကောင်းလေးတစ်ပုံ ရဖို့ဆိုတာက Exposure (အလင်းပေး) မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ အလင်းပေးမှု (Correct Exposure = CE) လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကင်မရာတိုင်းမှာ ဒီအချက်ကို အဓိက ပူးတွဲ ထိမ်းချုပ်ဖို့ Aperture (အလင်းဝင်ပေါက်)၊ Shutter Speed (အလင်းတံခါး အမြန်နုန်း) နဲ့ ISO (အလင်းစွဲနုန်း၊ အလင်းသိရှိ လက်ခံနိုင်မှု မြန်နုန်းအဆင့်) ဆိုတာတွေ ပါပါတယ်။
Correct Exposure ပုံလေးတစ်ပုံ
ကင်မရာ ပြင်ပက ပုံရိပ်ဟာ ကင်မရာမှန်ဘီလူးကို ဖြတ်ဝင်လာတဲ့ အခါ အလင်းအနည်းအများကို မှန်ဘီလူးမှာပါတဲ့ Aperture အလင်းဝင်ပေါက်ကို အကျဉ်းအကျယ်လုပ် ထိမ်းချုပ်ပြီး လိုအပ်သလောက် (လိုသလို) ဝင်ရောက်စေတာ၊ မှန်ဘီလူး အပါချာဆီက ဖြတ်လာတဲ့ ပုံရိပ်ကို ပုံရိပ်ဖမ်းမဲ့နေရာဆီကို ဖြတ်သွားခွင့်ပြုမယ့် ကင်မရာရဲ့ Shutter (အလင်းတံခါး) က လိုအပ်သလို အချိန်ထိမ်းချုပ် ဖွင့်ပိတ်ပေးတာ၊ Image Sensor ပုံဖမ်းလွာ (Film, Digital Camera တွေမှာတော့ CCD, CMOS စသည်) ကနေ ရောက်လာတဲ့ ပုံရိပ်ကို စွဲထင်စေတဲ့နုန်းတစ်ခု သင့်တော်ရာနဲ့ (ISO 50,100,200,400,..စသည်) ဖမ်းယူတာ တွေက ဓါတ်ပုံရိုက်တာမှာ အခြေခံအလင်းပေးမှု (Exposure) ပါ။
ဒီနေ့ဆက်ပြောမှာလေးက အဲဒီ အထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အပါချာ Aperture ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ဒီအကြောင်း (သဘောတရားလေး) သိထားရင် Amature ကင်မရာ ကိုင်နေသူတွေရော၊ Pro ကင်မရာကိုင်မယ့်သူကော အသုံးဝင်ပါတယ်။ မှန်ဘီလူးမှာ ပါတဲ့ lris Diaphragm က Aperture အကျဉ်းအကျယ်ကို လုပ်ပေးပါတယ်။ Aperture ကို “f“ သင်္ကေတ နဲ့ဖေါ်ပြပါတယ်။ မတူတဲ့ ကင်မရာ၊ မှန်ဘီးလူးတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အပါချာ နံပါတ်တွေကf1.4,2, 2.8 ,4, 5.6, 8 , 11 , 16 , 22 , 32 ဆိုတဲ့ နံပါတ်တွေ ပါပါတယ်။ ဒါက အခြေခံ အပါချာ နံပါတ်တွေပါ။ ဒီနံပါတ် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြောင်းအလဲကို one stop လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Digital Camera တွေမှာတော့ ဒီနံပါတ် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ ထားရိုက်လို့ရတဲ့ နေရာ တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက်စီ ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ (ဥပမာ –f8 နဲ့f11 ကြားမှာf9 ,f10 တို့လိုမျိုး ရှိတာကို ပြောတာပါ)
မှန်ဘီးလူးပေါ်က အပါချာ နံပါတ်တွေ
ဒီ Aperture နံပါတ်လေးတွေကို Manual ကင်မရာတွေ၊ Manual Setting (Function) ပါတဲ့ camera တွေ နဲ့ Semi Manual (/Auto) camera မှာ ထိမ်းချုပ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပါချာ “f“ နံပါတ်သေးတွေက အလင်းဝင်ပေါက် ကျယ်ပြီး အလင်းဝင်တာ များပါတယ်။ “f“ ကြီးရင် အလင်းဝင်ပေါက်ကျဉ်းပြီး အလင်းဝင်တာ နည်းပါတယ်။ ဆိုလိုတာကf5.6 ကf11 ထက် အလင်းပိုဝင် (one stop ပိုများ) တဲ့သဘောပါ။ ဒီတော့ ရိုက်မယ့် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှာ အလင်းများဖို့ လိုတယ်ဆိုရင် အပါချာကို ဖွင့်ပေး (ကျယ်ပေး) (or) အပါချာနံပါတ်ငယ်ပေး ရပြီး ရိုက်မယ့် ဓါတ်ပုံအခြေအနေက အလင်းများနေလို့ အလင်းလျှော့ပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုရင် အပါချာကို ကျဉ်းပေး (or) အပါချာနံပါတ်ငယ်ကြီး ရပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလို ပုံလေးတစ်ပုံကို Exposure ပေးရာမှာ မှန်ကန်တဲ့ အလင်းပေးမှု Correct Exposure CE က အပါချာ 16 ၊ Shutter တံခါးဖွင့်ပိတ် အမြန်နုန်းက တစ်စက္ကန့်ရဲ့ 100 ပုံ တစ်ပုံ နဲ့ အလင်းသိမှု့နုန်းက ISO 100 လို့ဆိုပါစို့။ Correct Exposure CE = Aperture (f16 ) x Shutter Speed ( 1/100 ) x ISO (100 )
ဒါဆိုရင် အပါချာ နံပါတ်ပြောင်းသွားလို့ ဓါတ်ပုံမှာ အလင်းအနဲအများ ဖြစ်သွားမယ့် ပုံလေးတွေကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ပါ။ (f 16 ထက် အပါချာ ကျဉ်းသွားရင် ပုံကမှောင် (ရင့်) လာပြီးf16 ထက် ကျယ်လာရင် ပုံက လင်း (ဖျော့) လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)။
အပါချာ အကှဉ်းအကျယ်၊ အလင်းအနဲအများ
အပါချာ နံပါတ်ပြောင်း တာက အလင်းအနဲအများတစ်ခုတင် ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ပုံထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ Subject (အကြောင်းအရာ) တွေရဲ့ ရှေ့နောက် ပြတ်သားမှုဇုန်နယ် Depth Of Field (ကိုယ်ချိန်လိုက်တဲ့ focus ဖြတ်လိုက်တဲ့ အရာဝထ္ထုရဲ့ အရှေ့နဲ့ အနောက် မှာ ရှိတဲ့ အရာဝထ္ထုများရဲ့ ပြတ်သားမှု) ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ အပါချာ ကျဉ်းရင် ကိုယ်ချိန်လိုက်တဲ့ အရာဝထ္ထုရဲ့ အရှေ့နဲ့ အနောက် မှာ ရှိတဲ့ အရာဝထ္ထုများရဲ့ ပြတ်သားမှုက ပိုကောင်း (ပိုပြတ်သား) ပြီး အပါချာ ကျယ်ရင် ကိုယ်ချိန်လိုက်တဲ့ အရာဝထ္ထုရဲ့ အရှေ့နဲ့ အနောက် မှာ ရှိတဲ့ အရာဝထ္ထုများရဲ့ ပြတ်သားမှု ဇုန်နယ်က နဲသွားပြီး ကိုယ်ချိန်တဲ့ အရာဝထ္ထုတစ်ခုတည်းသာ ပြတ်သားကာ ကျန် အရှေ့နဲ့ အနောက် မှာ ရှိတဲ့ အရာဝထ္ထုများက ဝါးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရလဒ်ကိုပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်သူတွေက ကိုယ်လိုတဲ့ ဓါတ်ပုံ အခြေအနေမျိုးရအောင် ထားပြီး ရိုက်ယူကြပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် ရှုခင်း ၊ ဒါမှမဟုတ် ရှုခင်းနဲ့ တွဲပြီး အမှတ်တရ ရိုက်တာမျိုးလို ရိုက်ရမယ့်ပုံမျိုးတွေကို အပါချာ ကျဉ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရိုက်မဲ့ အရာဝထ္ထုတစ်ခုတည်းသာ ပြတ်သားစေကာ ကျန်အရှေ့နဲ့ အနောက် မှာ ရှိတဲ့ အရာဝထ္ထုများကို ဝါးသွားစေလိုတဲ့ ပုံမျိုးမှာ ဆိုရင်တော့ အပါချာကို ကျယ်နိုင်သလောက် ကျယ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးတွေကို လေ့လာပါ။
အပေါ်ပုံလေးမှာ ရိုက်တဲ့ ကင်မရာနဲ့ အကွာအဝေး မတူတဲ့ နေရာက လူတွေထဲက ကိုယ်ချိန်ထားတဲ့လူ (Best focus point) ကနေ အရှေ့နဲ့ အနောက် လက်ခံနိုင်တဲ့ ပြတ်သားမှု ဇုန်နယ် (Depth of field) ကို ပုံမှာ ပြထားပါတယ်။ DOF area ပိုများ (ပိုကျယ်လိုရင်) အပါချာကို ပိုကျဉ်းပေူရပါတယ်။ Depth of field မှာ Best focus point ကနေဆိုရင် ပြတ်သားမှု ဇုန်နယ်က အရှေ့ထက်နောက်က ပိုများပါတယ်။ အောက်ပုံလေးမှာ အပါချာ နဲ့ Depth of field အပြောင်းအလဲကို ကြည့်ပါ။
အပါချာ အကျဉ်းအကျယ်နဲ့ ပြတ်သားမှု ဇုန်နယ်
အထက်မှာ ပြောခဲ့တာတွေကတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ရာမှာ ပုံလေးကိုကောင်းစေဖို့၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံမျိုးရစေဖို့ အဓိက အလင်းပေး Exposure ယူရာမှာ ပူးတွဲ ထိမ်းချုပ်ရတဲ့ Aperture ၊ Shutter Speed နဲ့ ISO တွေထဲက Aperture ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေပါ။
အပါချာ၊ ရှပ်တာ၊ ISO မှန်အောင်တွဲပါမှ
ပညာရပ်ကို အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်းနိုင်စေဖို့၊ ဓါတ်ပုံပညာ သူငယ်တန်းစာ ဗဟုသုတကို သိသမျှ ဝေငှနေသူပါ။ (အခြေခံ အဆင့်လေးများမို့ ဆြာမှော်၊ ဆြာဂီ တို့ကဲ့သို့ ဆြာများ လိုတာလေးတွေ ဖြည့်ပေးစေလိုကြောင်းပါ ခင်ညာ )
ကောင်းတယ်ဗျိုး ဆက်ထားဆရာရေ့ ဆက်ထား
မရေးမရေးနဲ့ ..ရေးမယ့်ရေးတော့လည်း ရှယ်ပါလား ဆြာသော့ရယ်….
အဲ့သည့် အပေါက်ကိစ္စfnumber နဲ့ DOF
ကိစ္စကို ဒါ့ပုံသမားတယောက် မဟုတ်တဲ့လူ နားလည်အောင်
ရှင်းပြရတာ အတော် လက်ပေါက်ကပ်လို့ လက်ရှောင်ထားတာ
ဆြာသမားက ပုံလေးတွေနဲ့ပါ ဝေေ၀ဆာဆာ အမြင်လွယ်အောင်
ရေးထားတာ မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ဝူးဗျာ..
အဲဒီအပေါက်ကိစ္စက.. ကင်မရာသမားတွေ အင်မတန်နားလည်ရခက်တာပဲ..။
နံပါတ်ကြီးလာရင်.. အပေါက်သေးသွားတာတခုနဲ့တင်.. လည်နေပြီ…
အပါချာကို.. အက်ဖ် သင်္ကေတကြီးနဲ့ လုပ်ထားတာကလည်း အင်မတန်မျက်စိလည်….
စတစ်ကီလေးပါလုပ်ပေးလို့ နော်ကလည်း ကျေးကျေးပါ သဂျီးရာ
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှာ အလင်းအနဲအများကို ထိမ်းပေးဖို့ အပါချာရယ်၊ Shutter speedရယ်၊ ISO (အရင်ကတော့ ASA) မှာ စံနုန်းတူ တိုင်ပင်ကိုက် ဖြစ်စေဖို့ Aperture မှာf(fအသေး) နဲ့ နံပါတ်လေးတွေ မှတ်ထားပါတယ်။f1.4,2, 2.8 ,4, 5.6, 8 , 11 , 16 , 22 , 32
(တစ်ခုစီ ကျော်ကြည့်ရင် နှစ်ဆလေးတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါမယ်) (Shutter speed no တွေမှာလည်း တူတူပဲ)။ အဲဒီ တစ်ထစ် တစ်ထစ် ပြောင်းတာကို ဓါတ်ပုံပညာမှာ one stop (တစ်ထစ်) အလင်းတစ်ဆ အတိုးအလျှော့လုပ်တယ်လို့ မှတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ (နောက်ဆက်ရေးမယ့်) Shutter speedရယ်၊ ISO မှာပါ one stop စီပြောင်းတာကို ပုံရိုက်ရာမှာ စံနုန်းတူ တိုင်ပင်ကိုက်ဖြစ်စေဖို့ (သင်္ချာလိုတွက်ယူရင်) ချိန်ကိုက်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဒီနံပါတ်လေးတွေ ဖြစ်နေရတာပါ။ (ဥမမာf2.8 တို့f5.6 တို့) နောက်ဆက်ရေးလာမယ့် Flash GN ( Guide Number) တွေရောက်ရင်ပြန်လာအုံးမှာ
CE မှာက Apeture x Shutter x ISO (တစ်ခုပေါ်တစ်ခု တည်မှီပြောင်းလဲပါတယ်)။
အဲ ၃ခုထဲက တစ်ခုကို မူတည်ထားပြီး ကျန်နှစ်ခုကို stop တူညီစွာ အတိုးအလျှော့ လုပ်ရင် ဓါတ်ပုံမှာ exposure မပြောင်းလဲပဲ မှန်ကန်တဲ့ အလင်းပေးမှုနဲ့ ရလဒ်ပြောင်းလဲတဲ့ ပုံ (effect) ကိုရစေပါတယ်။ (ပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ရေးနိုင်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်)။
ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံပညာ စသင်တော့ ဆရာသမားများ အလွတ်ကျက်ခိုင်းတဲ့ လင်္ကာလေးတစ်ခု ရှိတယ်ဗျ …
နေပူ 11 မိုးအုံ့ 8 အရိပ်ထဲမှာ 5.6 တဲ့
ရှပ်တာကတော့ 1/60 ပေါ့နော် ..
အဲဒါလေးကို အခြေခံပြီးမှ ဆက်လက်ချဲ့ထွင်သွားမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် …။
လက်သင်တွေ အတွက်ပါနော ….
ဆရာတွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး …
နေပူ ၁၆ ပါဗျ… ဆြာ့ဟာ one stop ကျနေတယ်…
Shade 8 ကိုတော့ တပုံလုံးစာ DOF ပြေပြစ်လို့ photojournalism သမားတွေရဲ့
F-Number လို့ခေါ်သတဲ့ …
shutter speed က 1/60 ဆိုတာ မျက်တောင်ခတ်ရင်ကြာတဲ့အချိန်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူလို့ဗျ..
monitor refresh rate ကလည်း 60Hz မဟုတ်လား..
ဆရာလေးဂီ … ကျွန်တော်က potrait သမားလေဗျာ ..
ူlandscape သမားမဟုတ်ဘူး ….
ဒါဆို portraiture က 1Stop ဆုတ်ပီး ရိုက်ရတာပေါ့…
ကျနော့်ဆြာ ကိုဝီကီကတော့ ကျနော့် ကို သည်လိုသင်ပေးထားတာပဲဗျ
f 16 နဲ့ဆို landscape မှာ detail ပိုပြတ်ပါလိမ့်မယ် …
ဒါပေမယ့် potrait သမားတွေအတွက် Exposure နဲနေပါလိမ့်မယ် ..
မျက်နှာကို ဖြူစေချင်တာအတွက် ပါသလို နောက်ဝါး ဖြစ်စေချင်တာလဲ ပါပါတယ် …။
ဟုတ်တာပေါ့ ဆြာတို့က အပေါက်ချဲ့ သမားတွေ…ခစ်ခစ်..
(လျောက်မတွေးပါနဲ့ ပိတ်သတ်ကြီး အပါချာ ကိုပြောတာပါ)
တားတားတို့ကလည်း လည်း ကျယ်လေကြိုက်လေပဲ
အဲဒီအပေါက်နဲ့ ရှပ်တာစပိအနှေးအမြန်ကို ရေးတေးတေး သဘောပေါက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြင်ပမှာ ရှိနေတဲ့ အလင်းရောင်အနေအထားကိုကြည့် ပြီး ဘယ်အပေါက်ကိုဘယ်လောက်မြန်မြန် နှိုက်
(အာရှုပ်ကုန်ပြီ) ဘယ်အနေအထားနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်၊ စိမ်ပြေနပြေ လိုက်ပြောင်းပြီးရိုက်ကြည့်နေရတယ်၊ အချိန်မရတဲ့ဟာဆို အော်တိုနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တာပဲ။ ဆရာသော့ပြောတဲ့ အချိုးညီ ရမဲ့စနစ်တွေကို နားမလည်သေးတာလဲပါတယ်။ဆက်ရေးပေးပါဦး။ ဟိုရက်ကဆရာဂီပြောတဲ့မီတာရင်းမုဒ် တွေပါစဉ်းစားလိုက်ရင် ကင်မရာကိုင်ချင်စိတ်တောင် ပျောက်လာပြီ။ တော်ပြီအော်တိုပဲရိုက်တော့မယ်။
ဆြာသော့ပြောတာတွေ ပိုင်အောင်လုပ်ဗျ. ….အဲ့လာတွေ ပိုင်ရင် ရပီ….
Metering mode က ထားလိုက်ဦး …
ဆြာသော့က အပါချာ(အပေါက်) အကျဉ်းအကျယ် ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားတော့
ကျနော်က အနှေးအမြန်ပိုင်းကနေ အားဖြည့်ပေးပါ့မယ်ဗျာ…
ကိုကြောင်လေး ဘောပွဲရိုက်တယ် ဆိုပါစို့ …action ပေါ့ဗျာ..
၁) shutter အမြန် နဲ့ ရိုက်ရမယ်…
၂) အပေါက်ကြီးကြီး ထားရမယ် ….
ရှပ်တာ ဆိုတာ အမြဲ ပိတ်ထားတာဗျ. ..ရိုက်တဲ့အချိန်ပဲ ဖတ်ခနဲ ပွင့်ပီး ချပ်ကနည်း ပြန်ပိတ်သွားတာ
shutter speed ဆိုတာ အဲ့သည့် ခနလေးသော ပွင့်သည့်အချိန်လေးကို ဆိုလိုတာ…
အထက်ကဟာ ပြန်ကောက်ရရင် အမြန်နဲ့ ရိုက်တယ် 1/200s ဆိုပါစို့ဗျာ…
၁စက္ကန့်ရဲ့ ၂၀၀ပုံ ၁ပုံပဲ ပွင့်မှာ …(ပွင့်တော့ အလင်းဝင်တယ် ပုံရိပ်ထင်တယ်ပေါ့)
သည်တော့ အပေါက် (အပါချာ) ကိုကျယ်ကျယ်ထားရမယ်ဗျာ…. ဒါမှ အလင်းများများဝင်မှာကိုး
f 5.6 ဆိုပါစို့ရဲ့ဗျာ…
သည်တော့ exposure ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်က
ကိုစိန်သော့ကြီး မအားတဲ့ကြားက စေတနာရှေ့ထားပြီး စိတ်ရှည် လက်ရှည် ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါနော
အခုလို အသေးစိတ် ပြောပြမှပဲ ကျွန်တော်တို့လို လူပြိန်းတွေက နားလည်တာ
ဆရာသော့ အားတဲ့အခါ ဆက်ပေးဘို့ တစ်ဆက်တည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ
ဆက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလျှက်ပါ ကိုနိုခင်ဗျာ။
ဦးဦးရိုက်တဲ့ အဝေးကပုံတွေကို ဘယ်lens သုံးပြီးရိုက်ထားပါသလဲခင်ဗျာ…
ဥပမာ ဒီပို့စ်မှာတင်ထားတဲ့ သစ်ပင်ပုံပေါ့…
သစ်ပင်ကို focusထားပြီး နောက်က ရှုခင်းတွေဝါးသွားစေဖို့ ဘယ်lensကို သုံးထားပါသလဲ
ီNikon D3100 မှာတွဲပါလာတဲ့ ၁၈ – ၅၅ ကို အဆုံးဆွဲပြီး အပါချာ အကျယ်ဖွင့် (f 4.2) လိုက်တာပါ ဇီးရိုး။
အတတ်ပညာ သေရွာယူမသွားကြေးလို့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြားတုန်းက သိပ်အားရမိတယ်။ အခုဆြာသော့လို ပရိုသမားတွေဆီက ဖြန့်ဝေပေးတာကို လေးစားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလို ကိုစိန်သော့တို့လို ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေ ရှိနေတဲ့ တိုင်းပြည်ဘဲဗျာ။
ပြီးတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မန့်နေတဲ့ ပညာရှင်ဆရာကိုအောင် ခေါ် ကိုချို။
ခုတခါ မမန့်တဲ့ ပညာရှင် ဆရာဂျိုမို တို့ကိုလည်း သစ်မင်း က ရေးသားပေးပို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံအက်ဆေးအရေးကောင်းသော ဆရာမဝေဝေ၊ စာရေးဆရာရင့်မကြီးဘဝကနေဓာတ်ပုံကိုလှမ်းဖက်
ထားတဲ့ကိုပေါက်၊ အားကျမခံ လက်စွမ်းပြတဲ့ ကိုဘလက်ချော၊ ဝီအာဝမ်း ဟား ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပါ။
ကျန်သူတွေ မမှတ်မိလို့ မေ့နေတာဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ပါဗျို့။
စီးပွါးရေးပညာစကားနဲ့ ဆိုရင် ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စီးပွါးရေးဗျ။
နိုင်ငံတော်တော်များများ အဲဒီ ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနဲ့ ဝင်ငွေတိုးတာတွေ့ဘူးတယ်။
ဟိုးအရင်က ဆရာညောင်ဦးဖိုးချို (တခြားဆရာတွေဖြည့်စွက်ပေးပါ) တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပန်းရိုးမ ကလဲန်ဒါဆို
ဓာတ်ပုံနဲ့ Time, Newsweek, Far Eastern Economic Review ပစ္စည်းကြော်ညာတွေ။
Forbes, National Geographic Magazine မှာ ကိုယ့်လူတွေပုံတွေ မြင်ချင်လိုက်ပါဘိတော့ဗျာ။
ဟားဟား ဘလက်က ဓါတ်ပုံ ၀ါသနာရှင် စစ်စစ်ပါဗျို့ ကိုသစ်ရေ။
ဂီဂီပြောတဲ့ အပေါက်အကြောင်း ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါဗျို့။
ကိုစိန်သော့ နဲ့ အပြင်မှာ ဆုံချင်တယ်ဗျာ
ကျုပ် ကင်မရာ ကြတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုတော့
ကင်မရာ မရှိလို့ သာ ဝယ်ထားရတယ် ၊
ရိုက်တဲ့ ခလုပ်နှိပ်ရင် ဓါတ်ပုံ ရမယ် ။
ကျန်တာ ဘာမှ နားလည်တာ မဟုတ်ဘူးရယ် ။
အခု ပို့ စ်က ကျုပ် ကင်မရာ နဲ့ မဆိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်
ဒါပေမယ့် ကူးခွင့်ပြုပါ ကိုစိန်သော့
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့
သိပ်မကျွမ်းတဲ့ ကင်မရာမန်းတွေ နဲ့ အပြင်မှာ ဆုံတဲ့အခါ
ဒါ “ ဆရာစိန်သော့ ” ကျမ်းဆိုပြီး
လက်ဆောင်ပေးလို့ ရအောင် လို့ ပါ
သိပ်ကို ဆုံချင်ပါတယ်ဗျာ။ တွေ့ကြရအောင်လေ။ ကိုပေ gmail ကိုစာလွတ်လိုက်ပါမယ်။
ဓါတ်ပုံ ၀ါသနာ ပါသူ မို့ ဒါမျိုးတွေ ဖတ်လိုက်ရတော့ အတော့်ကို ကျေနပ်မိသားဗျ။
နောက်ဆက်တွဲ လေးတွေလဲ လုပ်ပါဦး အားပေးနေမယ်။
ဂေဇက်မှာအရောင်အသွေးအတော်စုံလင်လာပါပီ၊ယခုလိုအများအတွက်အကျိုးရှိပြီး ပညာရရှိစေသောပိုစ့်များကို ပညာရှင်များက၀ိုင်းဝန်းပြီးများများရေးသားပေးစေချင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံပညာကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်လို့ ကိုစိန်သော့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ဆက်လက်ပြီးရေးသားပေးဖို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။
နေပူ 11 မိုးအုံ့ 8 က . အလှပုံတွေ အတွက် လား .. landscape ကို အဲ့ စာဆိုနဲ့ ကစ်နေတာကြာပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ။
နေပူထဲမှာf11 နဲ့ ရိုက်တာ landscape ရတာတော့ ရမယ်ဗျ ..
ဒါပေမယ့် detail မပြတ်တာမျိုး ရှိလိမ့်မယ် …။ ဥပမာ သစ်ပင်က သစ်ရွက်လေးတွေ ခဲနေတာမျိုး … ။ အရောင် ဖျော့သွားတာမျိုး ဖြစ်လိမ့််မယ် …။
အဲဒါမျိုးကတော့ 16 အထိ ဆင်းပေါ့ဗျာ …။
လူပုံ အလှရိုက်သမားတွေကတော့ မျက်နှာကို ဦးစားပေးရပါတယ် …။ မျက်နှာက F16 နဲ့ဆိုရင် နဲနဲ မဲမယ်ဗျ..။reflector ပါရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ ..။နောက်တစ်မျိုးက f16 နဲ့ဆို detail ပြတ်တော့ မိန်းကလေး မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံတို့ .. မွှေးညှင်းပေါက်တို့ ထင်းထွက်လာလိမ့်မယ် ..။ နောက် နောက်ဝါးဖြစ်တာ နဲသွားလိမ့်မယ် ..။
F11 နဲ့ဆို အဲဒီ့ပြသနာ အေးတယ် ..။နဲနဲမှုန်သွားတော့ မျက်နှာ smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ …နောက်ဝါးလဲ ပိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ..။
နောက်တစ်ခုက လူပုံအလှရိုက်သမားတွေသုံးတာ Tele lens များတယ်ဗျ ..။ tele lens သုံးရင်လဲ aperture ပိုဖွင့်ပေးရတယ် …။ tele lens မှာ မှန်ချပ်အရေအတွက် ပိုများတဲ့အတွက် အလင်းပျောက်ဆုံးမှုရှိတတ်လို့ aperture ပိုဖွင့်ပေးရတယ်လို့ ဆရာ့ဆရာတွေ သင်ပေးခဲ့ပါတယ် ..။
land scape ကတော့ normal – wide သုံးတာ များတယ်လေ ။ ဒါကြောင့် 16 ကို အသုံးများတာပါ ..။
အဟမ်း … အဲ့လာဒွေ …တိဝူး …သင်ပေးပါချို သင်လည်းပေးဝူး…
တားတားကတော့ (ရှားရှားပါးပါး) လူပုံရိုက်ရင် nifty fiftyပဲသုံးတယ်..
အပါချာ သိပ်မဖွင့်ပါဘူးf1.8 လောက်ပါ (any location)..ခစ်ခစ်…
(နောက်မှ အားရင် Bokeh အကြောင်း တင်မယ်ဗျို့)
ဒါနဲ့ စကားစပ်လို့ပြောရရင် သည်မှာ တားတားနဲ့ ရုပ်ချင်းနည်းနည်းဆင်တဲ့ ဒါ့ပုံဆြာ
တယောက်ရှိတယ်… အဲ့ဆြာကတော့ လူပုံပဲ ရိုက်တာ …70-200 f2.8L ပြောင်းကြီးနဲ့
တားတားက သူတို့အတွဲကို ရိုက်ပေးပြီး တင်တာများတယ်…(ဒါ့ပုံဆြာများ
သနားစရာကောင်းချက် ….. ဆံသဆြာလိုပဲ …ဒါက ကြုံလို့)
တခါတခါ မော်ဒယ်ထွက် ရှုတယ်ပေါ့ သူနဲ့ …
အဲ့ကျရင် သူက Zoom တပ်ရင် တားတားက ၅၀မမ …
ဂီဂီတို့ ပေါ့ထလိတ် အပျင်းကြီးချက်များ …၅၅-၂၅၀တပ်ပီး
ထိုင်ရာမထရိုက်တာ ….မော်ဒယ်က ဟိုဘဲကို ပိုစ့်
တားတားက ကန်းဒစ် ဖြတ်ရိုက် …အဲ့လိုဒါ့ပုံဆြာ…(ရိုက်ကြဦးမား…??)
ကြုံလို့ ပြောမယ်နော် ..တားတားကို မဟာ ဖေ့စ်ဘုတ်တော်ကြီးမှာ
အတ် ကြတဲ့ ရွာသူားအပေါင်းတို့ …… အဲ့သည့်ဆြာနဲ့
တားတားနဲ့ ကိုမမွှားကြပါနဲ့ …
တားတားကို ကြွားထားတယ် လို့ပြောတဲ့ အန်တီတို့….
မူးမူးရူးရူးနဲ့ တက်လာပီး “ကောင်မလေးကို လွှတ် လိုက် ငါ့ဆီကို” တို့ဘာတို့
မန့်တဲ့ အရက်သမားတို့ …လေဘယ်လ်ကို သေချာဖတ်ပေး ကြပါခည…
ဟိုဆြာသမားကို အားနာလို့ပါခည… အင်ဂျီးဆိုင်းမထိုးထား၇င် အင်ဂျီး ရိုက်တဲ့ပုံ
မဟုတ်ကြောင်းပါ ..tag လုပ်ခံထားရတာသာ ဖြစ်ပါတယ်…
အင်ဂျီးက တကိုယ်တော်တိုင်းတမားလေးပါ ..နားလည်ပေးကြဘာာာ…..
နောက်ထပ် ရှိတေးတယ်. ဒါကလိုကယ်ကဆြာတွေ လုပ်တာ
တောက အဘွားကြီးပုံရိုက်လာပီး ….ခွေးပုံရိုက်ပီး သင်္ချိုင်းပုံရိုက်ပီး
ဂီ့နာမည်ကြီး tagတာတို့ ….. သည်ဘဲတွေကိုလည်း တော်လှန်ပစ်ရမယ်…
ကျွန်တော်လဲ မုဆိုးဆိုင်သင် ပညာလေးတွေ ရေးပါဦးမယ်ဗျာ ..
ဆရာတွေကြားမှာ တက်ရေးရမှာ ပုခုံးချင်းယှဉ်သလို ဖြစ်မှာစိုးတယ်ဗျာ ..
ဒါကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပညာလေးတွေပဲ ရေးပါမယ်ဗျာ ..
ကိုဇော်မင်း.. ပျောက်နေတာကြာပြီ… ရွာပြန်သွားတာလား
အားပေးကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လေးစားမှုများနဲ့ မကြာခင်မှာပဲ မှတ်စု (၄) ကို ဆက်ပါမယ်။
ဒါမှ ဆြာသော့စ် ကွ…
အေးလေ ဂေဇက်ဘောလီဘော အသင်းကြီးပဲဟာ။
တယောက်ကို တယောက်အရောက် ပုတ်ပေးနေကြတာမလား။
ချန်ပီယမ်တွေ ချည်းဘဲ။ ပွဲတွေကလဲ တကယ်ကို သူ့ထက်သူ လူစွမ်းကောင်းတွေနော်။
ဆရာ ကျ တဲ့သူတွေ ညိမ်နေသေးတယ်။
ဂေဇက်ကြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးလာပြီဆိုတော့ ထိုင်ဖတ်တဲ့အလှဲ့ယူမယ်နော်။
အောင်မလေး………ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ U Pied Monitor Lizard (ခေါ်ရခက်ထှာနော် :neutral: ) ရာ
အန်ကယ် စိန်သော့ ရေးတာ ကင်မရာပညာဆောင်းပါးတွေ သိပ်သဘောကျပါတယ် ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် re-compose လုပ်ပြီးဓါတ်ပုံ ဖန်တီးတာလေးလဲတင်ပါအုံးဗျာ
Sealion ရေ၊ ဒါမိုးတွေကျ တို့ဓါတ်ဆြာကြီးဂီ နဲ့မှရမှာ (ဒီလိုပညာတွေ)။
ဆြာဂီ…………..လုပ်ပါဗျ………..နော်တို့အတွက် re-compose တွေ။
အဲ့လာ ကျပ်သွားဒါ ကျပ်သွားဒါ…
ကိုယ့်ပို့စ် ကိုယ် မမန့်ဘဲ တူများ ပိုစ့်တွေ လျောက်လည်နေတယ် …
ဘာလဲ re-compose တိဝူး …
ခိခိ …နောက်တာပါဗျာ …
သည်မှာ သေချာရေးထားတာလေး ရှိပါတယ် …ဖတ်ကြည့်ပါ…လို့ ….
ဘာမှ ဆြာမဂျီးဘူးဗျ ….
တခါသား f/1.8 အသုံးကောင်းပီး recompose အလုပ်ကောင်းတာ ..
မော်လဒယ် ဒေါက်ဖိနပ်မှာ ပဲဖိုးကပ်စ် ပြတ်တယ် မျက်ခွက်ကြီးက ၀ါးတက်သွားတာများ
မြင်မကောင်းဝူး …ဟီး …(ဖိနပ်ကြော်ငြာမှာ သုံးရင်တော့ ကိုက်မယ်..)
အဲ့သဟာနဲ့ sharpness လေးရသလောက်တင်ပီး B/W လုပ်ပလိုက်ရတယ်…
အဲ့ပုံ ဘယ်မှာမှ မတင်ဝူး ရှက်လို့… ဖွက်ထားတယ် ..သွပ်သွပ်…
(အဲ့လိုတော်တာများ ပြောပါတယ်ဆြာသောစ့် ရယ်…)
မှော်ဆရာက သူရတဲ့ လင်္ကာလေး ရွတ်ပြတယ်
နေပူ 11 မိုးအုံ့ 8 အရိပ်ထဲမှာ 5.6 တဲ့ ရှပ်တာကတော့ 1/60 ပေါ့နော် ..
ကျွန်တော့်ကို ကိုဖွတ်ကြောင် ရွတ်ပြတဲ့ လင်္ကာလေးကိုလဲ ပြန်ရွတ်ပြချင်သေးတယ်
နေပူ 34-22-37 တဲ့ မိုးအုံ့ လဲ 34-22-37 ပဲ တဲ့
အဲဒီ အကြောင်းလေးလဲ ရှင်းပြပါဦး ဗျာ
Draft တွေလာမကြည့်ကြေးဆိုလို့ ကြည့်ချင်စိတ်ကို ထိန်းပါသော်လည်း
ဟိုနေ့ကတည်းက ဂီဂီ က မာယာအကြောင်းအော်နေတာ
အခုကြည့်တော့မှ ကိုသစ်က လက်ကျန် အကြွေးတွေပါ
ဆရာစိန်သော့ ရဲ့ အပိုင်းလေးကိုလည်းစောင့်ဖတ်ပါမယ်။
ကိုသစ်မင်းရဲ့ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများကိုလည်း စောင့်ဖတ်ပါမယ်ပေါ့ဗျာ။
တကယ်တော့ ဓာတ်ပုံပညာဆိုတာ အတော့်ကို နက်နဲ ခက်ခဲတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပဲနော်။ လေ့လာဖို့ တော်တော်ကို လိုသေးတာပဲ။ မနောတို့ကတော့ ဒီတိုင်းရိုက်တာပါပဲ။ ဘာမှအလင်းအမှောင်တွေ ကာလာတွေ အနေအထားတွေ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ခုလိုပြောတော့လည်း နည်းနည်းတော့ သဘောပေါက်သွားတယ်။ ပိန်းတာလည်းပါပါတယ်လေ။ ဆက်လက်လေ့လာပါဦးမယ်နော်။
ရွာကိုမပြန်ဖြစ်သေးပါဘူး ကိုငြိမ်းချမ်းရေ…မလေးဘိုးဘိုးကြီးက ပြန်ခွင့်မပြုသေးဘူး…ဒီရွာထဲကိုမ၀င်ဖြစ်တာပါ၊ Intro လိုပဲ Silent Reader ပဲလုပ်နေလို့ပါ။
Shan Gyi says:
အခုလိုဖတ်ရမှပဲ နည်းနည်းတီးခေါက်မိတော့တယ် ဆရာစိန်သော့ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အမှတ်စဉ် (၄)ကို ဆက်ချီတက်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ